आफ्नो दुख अरुलाई सुनाउँदैनन् यी राशि हुनेहरु, जति पिडा भएपनि सहेरै बस्छन् ! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Horoscope/आफ्नो दुख अरुलाई सुनाउँदैनन् यी राशि हुनेहरु, जति पिडा भएपनि सहेरै बस्छन् !
सायद संसारमा यस्ता व्यक्तिहरु पनि छन् होला जो अरुको नियन्त्रणमा आफ्नो जीवन बिताउन चाहान्छन् । तर प्राय: हर कोहीलाई थाहा छ कि परिस्थिति अनुसार आफुलाई कहिले नियन्त्रणमा राख्नु हुँदैन, बरु उल्टै परिस्थितिलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्नु पर्दछ। तर हाम्रो इच्छा अनुसार जीवन चल्छ भन्ने आवश्यक हुदैन। व्यावहारिक जीवनमा सधै आफुले सोचे जस्तो हुदैन।
केही यस्ता व्यक्तिहरु पनि छन् जसले लगनशीलताका साथ सबै समस्याहरुको सामना गर्छन् भने कतिपय त्यस्ता मानिसहरु पनि हुन्छन् जसले समस्याको अगाडि आफ्नो घुँडा टेक्छन्। तर केहि यस्ता व्यक्तिहरु पनि छन्, जो आन्तरिक रूपमा जति विचलित भए पनि संसारलाई यस्तो देखाउछन् कि केही पनि भएको छैन … जस्तो कि सबै ठीकठाक छ।
अब यी व्यक्तिहरु को हुन् भनेर चिन्न कडा परिश्रमको आवश्यकता पर्दैन। किनकी राशि अनुसार थाहा हुन्छ कि को हुन् ती व्यक्ति जसले आफैमा धेरै दु:ख लुकाए पनि, अझै पनि संसारको सामु हाँसिरहेका छन्। आउनुहोस् राशि अनुसार ति साहसी व्यक्तिहरुका बारेमा चर्चा गरौ। यी साहसी नै हुन् किनकि दु:ख लुकाउन त्यति सजिलो हुदैन।
कन्या राशिका व्यक्तिहरु आफूलाई निकै सचेत बनाउँदछन्। उनीहरु आफ्नो कुरा सधै गोप्य नै राख्न रुचाउछन्। उनिहरु आनन्दित वा दु:खी, उदास वा आफ्नो जीवनबाट सन्तुष्ट छन् भन्ने कुरा उनिहरुलाई देखेर वा भेटेर अनुमान गर्न सकिदैन।
वृश्चिक राशिका व्यक्तिहरू धेरै सामाजिक हुन्छन। तर उनिहरूको विश्वास जित्न निकै गाह्रो हुन्छ। न त उनीहरु आफ्नो खुशी अरुको अगाडी राख्छन्, न त आफ्नो दुःख कसैलाई सुनाउछन् ।वृश्चिक राशिका व्यक्तिहरु आन्तरिक रुपमा निकै फरक हुन्छन्। आफूभित्र जत्तिनै उदासिनताले घेरेको भए पनि उनीहरू कसैलाई पनि आफ्नो अवस्थाको बारेमा थाहा हुन दिदैनन्। उनिहरू आफैसँग सन्तुष्ट हुन्छन् र सोच्छन् कि उनीहरूको समस्या उनीहरु आफैले बाहेक अरुले समाधान गर्न सक्दैनन्। तसर्थ, आफ्नो समस्याहरु संसारको अगाडी राख्न उपयोग ठान्दैनन् र आफ्नो समस्या आफै समाधान गर्ने प्रयास गर्छन्।
कुम्भ राशिका व्यक्तिहरुले जुनसुकै परिस्थितिहरुलाई गम्भीरताका साथ लिन्छन्। उनीहरुलाई यो राम्रोसँग थाहा हुन्छ कि उनीहरूको समस्यालाई अरुको आकर्षणको केन्द्र बनाएर कुनै फाइदा छैन। त्यसैले उनिहरु यस्तो कुराबाट टाढै बस्छन् र आफ्नो मन भित्र भएको कुरा अरु व्यक्तिले थाहा पाउलान् कि भनेर सचेत रहन्छन्।उनीहरुले आफ्ना भावनाहरु कहिल्यै देखाउँदैनन्। जबसम्म उनीहरु आफैले भन्दैनन् कि उनीहरु खुशी छन् वा दु:खी तबसम्म कुनै पनि कुराको अनुमान गर्न निकै कठिन हुन्छ।